Musharraxa Madaxweyne Ku-xigeenka UCID Oo Loo Doortay SOOL ...
Musharraxa Madaxweyne Ku-xigeenka UCID Oo Loo Doortay Siyaasi Ka Soo Jeeda SOOL
Hargeysa (Dhamays) – Xubnaha Golaha dhexe ee Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa u codeeyay Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka Xisbigaasi, Guddoomiye ku-xigeenka Koowaad iyo Guddoomiyaha Ku meel-gaadhka ah ah ee Xisbigaasi, kuwaasi oo uu dhamaantood soo Magacaabay Guddoomiyaha, ahna Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbigaasi Eng. Faysal Cali Waraabe.
Shir aan Caadi ahayn oo Xubnaha Golaha dhexe ee Xisbigaasi Maanta ku yeesheen Magaalada Hargeysa, ayaa waxay Cod ku ansixiyeen in Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka Xisbiga uu noqdo Dr. Axmed Cabdi Muuse (Abyan) oo ah Siyaasi Qurba-joog ah oo ka soo jeeda Gobolka Sool ee Somaliland, kaasi oo Faysal Cali Waraabe u soo xushay inuu noqdo Musharrax ku-xigeenkiisa.
Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka UCID Dr. Abyan oo noqonaya kii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Gobollada bariga Somaliland ee Musharrax Madaxweyne ku-xigeen ka noqdo Xisbiyada Somaliland 27-kii Sannadood ee u dambeeyay, ayaa Khudbad uu halkaa ka jeediyey ku sheegay in Musharraxnimadiisu ka tarjumayso Midnimada Somaliland ee Bari illaa Galbeed, waxaanu yidhi “Musharraxnimadaydu waxay ka tarjumaysaa Midnimada Somaliland iyo Wax Wada lahaanshiyaha Somaliland Bari illaa Galbeed. Arrintan waxa ku dhiiraday Guddoomiye Faysal oo Wakhti badanna ku bixiyey Wada-hadalladii bariga, gaar ahaan Gobollada aan ka soo jeedo, Taariikhduna way xusi doontaa, Waayo? wuxuu gartay waxay garan waayeen Siyaasiyiinta kale ee waaweyn ee Somaliland. Ummaddu waxay Guul ku gaadhaa Midnimo, haddaan la helin Somaliland Midaysan Bari illaa Galbeed sii jiri mayso Somaliland.”
Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka UCID wuxuu farriin u diray Dadka Gobollada bariga ee uu ka soo jeedo iyo Qurba-joogta deegaannadaasi, “Waxaan farriin u dirayaa deegaannada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle ee aan ka soo jeedo, waxaan leeyahay meesha deegaankaagu noqonayo iyo Cidda aad la deris noqonayso ILAAHAY baa kuu doora ee Adigu ma dooratid, markaa Dantiinu waxay ku jirtaa Somaliland oo aad wax wada yeelataan oo aad ka mid noqotaan, Cidna idinkama laha. Waxaan Qurba-joogta oo aan Anigu ka mid ahaan jiray leeyahay iska Daaya Dagaalka Muraayadda Koombiyuutarka (Ku kooban) oo kaalaya Dalka oo Arka Waaqaca iyo waxa Dadku ku sugan yihiin, markaas ayaad ogaanaysaan Waxa Dadka Dantoodu ku jirto, taasi oo ah inay Somaliland ka mid noqdaan oo aan laga lahayn, waxna la qabsadaan.”ayuu yidhi.
Cabdinaasir Muxumed Xasan Buuni oo isagana loo doortay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Xisbiga UCID, oo ka soo jeeda Gobolka AWDAL ee Somaliland, ayaa khudbad uu halkaa ka soo jeediyey ku sheegay “Haddii Carrabka lagu dhuftay, waxaan ahay Nin Reer Boorama ah oo ka soo jeeda Saldannadii Reer Buuni ee illaa Lixdankii Raysal-wasaare ku-xigeenkii (Soomaaliya) ahaa, markaa Taariikhdaa ay garan waayeen Xisbiyada kale Faysal baa gartay. Reer AWDAL dhowr arrimood bay ku dooranayaan Faysal Cali Waraabe, ta koowaad, Somaliland wax ka yar Faysal ma aaminsana, waxa uu intaa oo dhan uu ku hawlan yahay sidii Somaliland u dhamaystirmi lahayd, SSC waaka Somaliland keenay, Khaatumo ayuu keenay, Qoladiina Koonfurtu (Hargeysa) markaad Riigga qabsateen isagaa idinka furfuray, markaa Taariikhdaas oo dhan ayuu Faysal ku meel-marayaa.”ayuu yidhi, Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Xisbiga UCID.
Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo isaguna khudbad dheer halkaa ka soo jeediyey ayaa sheegay in waxa uu u socdaa uu yahay in Somaliland noqoto Dal Cadaaladdu ka shaqeyso “Anigu waxaan ku socdaa Madaxnimo maaha, ee waa inaan Somaliland ka dhigno Dal la wada leeyahay oo Caddaalad ku shaqeeya. Heshiisyadii aanu Khaatumo la galaynay waxa ka Kow ah in Awoodda la wada yeesho oo aanay Qolo Qudhi aanay wax walba yeelan sida hadda jirta.”ayuu yidhi.
Ugu dambayn, Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo isagoo Madasha ka maqan loo doortay Guddoomiyaha Ku Meel-gaadhka ah ee Xisbiga UCID, ayaa Madaxa Ololaha Doorashada oo Afkiisa ku hadlay sheegay inuu wax badan ku soo kordhin doono Xisbiga UCID.
Previous: “HIJRO, Waa Marka Dhulka Gaalada Laga Tago Ee Dhulka Muslimiinta La Tago, Laakiin Maanta Maxaa Ka Jira Dunida Muslimka..”? Sheekh Aadan-Siiro
Next: Iran Oo Tijaabisay Gantaal Wax Ka Dili Kara Mastaafo Dhan 2000KM